iMovie Sound Mmetụta - Olee ka Tinye Sound mmetụta na iMovie 08/09/11
Mara mma ụda na-egosi na nri oge gị video ike ime ka gị video ndụ. iMovie awade a ọnụ ọgụgụ nke nsonaazụ ụda n'ihi na ị na-etinye gị na obere vidiyo na oru ngo. Na iMovie nsonaazụ ụda, ihe i nwere ike tinye fun gị videos na-agbakwụnye ụda utịp ke iMovie dị nnọọ mfe.
Nzọụkwụ 1. y'otú iMovie oru ngo.
Ọ bụrụ na ị nwetara a oru ngo, na-amalite otu site na ịga na Njikwa> New Project. Ọ bụrụ na ị kwukwara videos ka iMovie Omume nchọgharị, ibu videos site na ịga na Njikwa> Bubata> Movies ma ọ bụ mbubata videos ka iMovie si gị camcorder nke na jikọọ na gị Mac.
Nzọụkwụ 2. Họrọ a ụda mmetụta
Pịa Music na Sound mmetụta button imeghe Music na Sound mmetụta window. Ebe i nwere ike ịhụ nza nke nsonaazụ ụda na ị nwere ike iji. Ị nwere ike ịhọrọ site na iMovie Sound mmetụta na iLife Sound mmetụta. Pịa play bọtịnụ na-ekpe ka ịhụchalụ ọ bụla ụda. Na search ubi, i nwere ike pịnye n'aha ụda mmetụta ngwa ngwa ahụ ya.
Họrọ onye na-amasị gị, na ịdọrọ ya ka video clip na Project na ebe ị chọrọ ụda na-amalite. Mgbe ahụ ụda mmetụta ga-egosi na green n'okpuru video clip. Ị nwere ike ịdọrọ ihe mmịfe ịgbanwe ogologo nke ụda mmetụta.
Nzọụkwụ 3. Gbanwee ụda mmetụta
Ugboro abụọ pịa ụda clip na soja window ga-emepe. Ị nwere ike ịgbanwe ụda clip oge aka na ịtọ audio mmetụta. Kụrụ "Audio" taabụ iji chọta ihe customization ọrụ.
I nwekwara ike ịgbakwunye n'okirikiri ka iMovie itinyekwu flavor ma tinye video mmetụta ka iMovie videos.
> Resource> iMovie> Olee otú iji Tinye Sound mmetụta na iMovie